Roger Penwill, qosolka cadistas - Geofumadas
Roger Penwill, qosolka cadistas
Mee, 2010 Baridda CAD / GIS, Leisure / waxyi
Waxa ugu fiican ee laga arki karo sawirada laga sameeyay deegaanka CAD waa Roger Penwill, oo bilaabay markii uu ahaa kartuunistaha wax ka qabanaya 1980. Tani waxay samaysay wakhti dheer sida hiwaayad, waxa uu daabacay buugag dhowr ah iyo sida uu u fiicnaaday in uu ka tago xirfaddiisa oo uu naftiisa si buuxda u shaaciyo sawir-gacmeed.
Wixii ujeeddooyinkan ujeedadan waxaan isku dayay in aan qoraalka ku bedelo Isbaanish, laakiin kaliya waa muunad. Sida ugu fiican waa booqo goobtaada cadcartoons.com.
Riixi Frank - Anigu waxaan eegayaa meesha ay tani socoto.
Naqshadaynta 4D. "Waxaan saadaalin karaa dhibaatooyinka dhismaha"
Naqshaduhu wuxuu yiraahdaa maaha inaad ku dhejisid cabbirka qorshaha, haddii aad kaala tashan karto qaabka kombiyuutarka.
Waa xakamayn firfircoon oo ka baxsan lakabyada.
Marka ay noo sheegaan saldhigyada hawlaha mobile, waxaan filayay wax kale.
"Xubinta cusub ee kooxda naqshadeynta waxay ku qoratay Facebook"
"Waxay ii sheegeen inaan xiranayo" (Snappy)
Ma aad iigu sheegeysaa inaanad ku caawin karin tababarka 86 CAD oo aad ka shaqeyn kartid mashruucan?
Waxaad sidoo kale arki kartaa qaar ka mid ah kuwa dhowaan la soo dhaafay Cadalyst, halkaas oo sida xaqiiqda ah aan hore u ogaanay.
Post Previous«Previous GPS Mobile Mapper 6, xogta dhoofinta ka dib
Post Next Halka Bentley uu la socdo aagga RayidkaNext »